FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA VIZMARANER - ALIKA
Fampahalalana sy sary avy amin'ny alika Vizmaraner
Alika mifangaro Vizsla / Weimaraner
Flash ny Vizsla / Weimaraner afangaroy toy ny alika adolantsento— 'Blitzen dia avy amin'ny renin'i Wiemaraner ary raim-pianakaviana Vizsla, samy AKC sy UKC no voasoratra anarana. Blitzen dia alika mavitrika sy be fitiavana. Isaky ny misy fotoana azony hatoriana am-pandriana miaraka amintsika, dia tia miforitra eo akaikin'ny tongotsika izy ary omeko milelaka tsara. Alika mamy sy tsara fanahy ary be fitiavana izy ary mahonon-tena. TIA ny olony izy ary tiany ny zanakay vavy. Manao zavatra tsara amin'ny antsika Izy saka , ary milamina miaraka amin'ny 'siste' a Doberman Pinscher / mpiandry mpiandry alemanina . Ankoatra ny ratra tery kely sy ny herin'ny angovo dia alika mahafinaritra izy. '
Ny Alika Vizmaraner dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Vizsla ary ny Weimaraner . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
alika miteraka lela manga
Flash ny Vizsla / Weimaraner afangaroy toy ny alika tanora mipetraka tsara
Flash ny Vizsla / Weimaraner afangaroy toy ny alika olon-dehibe amin'ny taona 3 amin'ny lanezy manao palitao manga
Flash ny Vizsla / Weimaraner afangaro amboa alika toy ny alika kely amin'ny kilalao mavokely
Flash ny Vizsla / Weimaraner afangaro amboa alika toy ny alikakely mankafy eny ivelany
Hazel the Vizsla / Weimaraner alika mitambatra dia alika matanjaka be nefa mahay mampiofana izay mianatra haingana be tokoa amin'ny angovo tsy manam-petra. Sary natolotry ny Alika niaraka tamin'i Dave, Alika San Diego ary Mpanazatra Puppy
Hazel the Vizsla / Weimaraner afangaro ny alika, sary natolotry ny Alika niaraka tamin'i Dave, Alika San Diego ary Mpanazatra Puppy
Hazel the Vizsla / Weimaraner afangaro alika, sary natolotry ny Alika niaraka tamin'i Dave, Alika San Diego ary Mpanazatra Puppy
miteraka alika shih tzu bichon
boston terrier chihuahua afangaro alika kely amidy
pitbull amerikana afangaro amin'ny lavaka manga
silky terrier shih tzu mifangaro
shih tzu sy pekingese mifangaro